Barruu fi saxaatoo gurraachaa fi adiitiin maxxansuu
Amaloota irratti cuqaasi. Kuni qaaqa amalootaa maxxansaakeef bana.
Gurraachaa fi adiitiin maxxansuuf dirqalaa filadhu. Odeeffannoo dabalataaf, hujeeka fayyadamaa kan maxxansaakee dubbisi.
Galmeen ammee gurraachaa fi adiitiin maxansama.
Impress LibreOffice fi Draw LibreOffice gurraachaa fi adiitiin maxxansuu.
Sanaa booda Maxxansi.
Qulqullina, jalaa Saxxiillaa ykn Gurraachaa fi Adii filadhuuti Tole fili.
Yommuu dirqaleewwan kana keessaa filatame, dhiheessonni hundi ykn fakkasonni haalluun ala maxxanfamu. Hojii maxxansaa Ammee tiif gurraachaan qofa yoo maxxansuu barbaade, dsirqalee Faayilii - Maxxansuu - Dirqaaalee keessaa filadhu.
Saxxiillaa haallota hunda gara sadarkaa olaantoo 256 gurraachaa irraa adiitti jijjiira. Barruu hundi gurrraachaan maxxanfanmu. Duubeen Format - Page - Backgroundtiin qindaa'e hin maxxanfamu.
Gurraachaa fi adii haallota hunda gara gatiiwwan lameen gurraachaa fi adii tti jijjiira. Handaaronni naannoo wantoota hundi gurraacha maxxansu. Barrun hundi gurraachaan maxxanfamu. Duubbeen Dhangii - Fuula - Duubbee dhaan qindaa'e hin maxxanfamu.
Guraachaa fi adii keessatti barruu qofa maxxansuu
Writerii LibreOffice keessatti barruu halluu dhanga'e maxxansuuf gurraachaa fi adii keessatti filachuu dandeessa. Kana galmeewwan barruu tarreefaman hundi maxxanfamuuf, ykn adeemsa maxxansa ammee qofaaf ifteessuu dandeessa.
Galmeewwan barruu hunda barruu gurraachaa fi adiitiin maxxansuu
Qabeentoota, jalatti, Gurraacha Maxansi malkateessiti, Tole cuqaasi.
Galmeewwan barruu ykn Galmeewwan HTML hundi barruu gurraachaan maxxansamu.
Galmeewwan barruu ammee barruu gurraachaa fi adiitiin maxxansuu
Meeshaalee - Qaaqa Dirqaleewwanii
Title is: Gurraacha fi Adiitiin Maxxansuu